ဗီဒီယိုက ချက်တင် မက္ကစီကို
ကမ်ချိန်းတွေ့-ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်နေ့စဉ်အများအပြားယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကိုရှာဖွေချင်တယ်တစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေကောင်း။ ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာ:ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ချိန်းတွေ့၊ကနေတဆင့်ကမ်၊အင်တာနက်ချိန်းတွေ့၊အွန်လိုင်းချက်တင်။ ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုချက်တင်အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်သွယ်ရေး။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအဆိုပါကင္မရာသည္။ မှအိပ်မက်များ၏အစည်းအဝေးသင်ယောက်ျားတွေ၊သငျသညျစတင်ရန်အနည်းငယ်သာ-ကွန်ပျူတာအင်တာနက်နှင့်အတူတစ်ဦးကွန်ယက်။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူဘရာဇီးမိန်းကလေးဗီဒီယိုစကားပြောနေပါတယ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များ၊အထူးသဖြင့်ဘရာဇီးမိန်းကလေးများ။ ရှာဖွေဖို့မိတ်ဆွေတွေ၊ကိုယ့်အလှည့်တွင်သင့်ကမ်ချတ်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့အသုံးပြုပြီးမိုက်ကရိုဖုန်းသို့မဟုတ်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့။ ချိန်းတွေ့ချက်တင်အခန်းပေါင်း။ ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများ။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ခွင့်ပြုရန်အသုံးပြုသူများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သူတို့ရဲ့ကမ်မဖြုန်းဖြုန်းအချိန်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့နှင့်အတူအီးမေးလ်များ။ အသုံးပြုနည်းဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအ၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကမ်မိုက်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝဘ်ဖစ္သျ။ ဆက်သွယ်ရေး။ ဤဆိုဒ်များကိုပူဇော်ကမ်ချတ်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။ တေးသွားကိုအတွက်အပြုသဘော၊လူအပေါင်းတို့သည်ပစ္စည်းကိုဓာတ်ပုံများနှင့်အတူဒါကြောင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်တစ်ဦးကဗီဒီယိုချက်တင်သို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူထောက်ခံကမ်ပိုကြိုက်ကျော်လွှားကြောက်ရွံ့ခြင်းမိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့။
ဤသည်အဟောင်းကိုဗားရှင်း၏ဗီဒီယိုချက်တင်အဆိုပါခြားနားချက်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အရင်ထက်အနည်းငယ်လျော့နည်း။ သို့သော်၊ဤအပြည့်အဝဗားရှင်း၊သောအလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဗီဒီယို။ မူရင်းအိုင်ဒီစကားပြောကြောင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်မှတ်ပုံတင်အခမဲ့အဘို့မိန်းကလေးများနှင့်အခပေး။ သင်အဘို့အပေးဆောင်နိုင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်အတွက်၊ဥပမာအားဖြင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ငွေကြေး။ ဟုတ္တယ္မ၊အပိုဟန်ချက်ညီအပြည့်အဝရရှိသုံးစွဲဖို့လူအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါရပ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုများပါဝင်သည်များအပြားမိန်းကလေးများနှင့်ဗီဒီယိုနှင့်အတူပရိုဖိုင်း။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်ကိုအလွယ်တကူရှာတဲ့မိန်းကလေးထံမှသင်တို့၏မြို့၏အရေအတွက်အသုံးပြုသူများအရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာ၏။ နှင့်ဤတစ်ခါတစ်ရံတွင်ထက်ပိုမိုချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ နှင့်စွမ်းရည်တက်တွေ့ဆုံရန်ရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအလွန်တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများကို။ မိန်းကလေးများအမှန်တကယ်ဤကဲ့သို့သောဗီဒီယိုချက်တင်၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သိရအာမခံသာပေးဆောင်အမ်ိဳးနိုင်လုပ်ကွက်မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူသယံဇာတ၏ပေါကျရှုံး။
ရာသီဥတုဆိုးရွားသို့မဟုတ်ကင်းမဲ့ဖို့ပိုက်ဆံထွက်သွားသို့။ အပေါ်ယခုမှစ။၊ဤသည်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ရန်သင်ကိုယ်တိုင်အခွင့်အလမ်းကိုအတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်စိတ်ဝင်စားဖို့လူများနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ။ သင်လိုအပ်သမျှသောကြောင့်မိုဘိုင်းကိရိယာနှင့်အတူအစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်မှာ။ သုံးကိရိယာနှင့်သင်အမည်ရတစ်ခုမူရင်းနည်းလမ်းပြောပြရန်တ၏အသုံးပြုသူများအထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကွဲပြား။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့အသုံးပြုဤအရင်းအမြစ်င်၊အခမဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့။ တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်။ မလေ့အကျင့်ကိုတရားမဝင်ကြောင်းအရာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်နှောက်ယှက်နှင့်။ အကြောင်းပြချက်များအတွက်လူတိုင်းနီးပါးကိုအသစ် ထာင္သူမ်ားထားပြီအကန့်သတ်အပေါ် ၊လုံခြုံတဲ့လမ်းကိုရှာတွေ့ဖို့တစ်မိတ်ဆွေကောင်း၊စိတ်ဝင်စားစရာအ နှင့်ပင်အခြားတစ်ဝက်၊လူသုံးမများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်မီနည်းပညာအရအဆင့်မြင့်လောက အဆင့္ျ။ အဓိကအဂၤါ၏ဤလျှောက်လွှာအကြောင်းကိုအခြားအသုံးပြုသူအများအသိအဇီး။ ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အခြားအသုံးပြုသူများသာကနေတဆင့်ဗီဒီယို၊ဒါပေမဲ့လည်းသာ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်စောင့်ရှောက်အမြင်ချင်းလဲလှယ်ရေး၏အခြားစုံတွဲများ၊သင်အလွယ်တကူတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဆိုဖွင့်လှစ်ဆှေးနှေးမှု။ ထို့ကြောင့်၊သူတို့နိုင်ပါတယ်၊နှင့်အခြားသူများ၏အဆိုပါစီမံကိန်း၊အမြင်ချင်သောသူတို့”ပံ့ပိုးမှု”သာတူသူတို့ကိုသူတို့ ကြောင့်၊များစွာသောနှစ်သက်မပြောဆိုရန်အတွက်သာအသက်၊ဒါပေမယ့်တွင်ပါဝင်ရန်အိမ်ခဲ့ကြသည်၊အရာအစဉ်အမြဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ပါကအက္ပ္ရုတ်တရက်မှတ်တိုင်များစနစ်တကျအလုပ်လုပ်နေ၊သင်သာတပ္ဆင္ရပါ၊ဒါပေမယ့်လည်းအရည်အသွေးစစ်ဆေးသင့်ရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု။ဟုတ်ပါတယ်၊အဆိုပါအစီအစဉ်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်မပါဘဲ။
သိမည်သည့်အသက်အရွယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ညစ်စရာအလုပ်တခုကို၊အစည်းအဝေးလေးဆယ်လူမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံရသည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာအတွက်ရှာဖွေနေကြသည်အသီးအသီးအခြားအဖို့ရှာဖွေသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ ထိုမေးခွန်း၏နေရာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးနောက်အနှစ်လေးဆယ်ဖြစ်လာ၊အလွန်အရေးကြီး။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်လူကို၊ငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းသာဖြစ်ခြင်း၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟောပြောပွဲ ကိုချစ်ရှိမရှိသို့မဟုတ်ရုံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ထို့နောက်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ကလပ်၏လေးဆယ်ကျော်အတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ရှာကြသည်အတွက်။ သင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်ကျော်သည်လူများအဘို့အသက်လေးဆယ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်ပါသည်၊အထူးသဖြင့်ဆိုရင်သင်အနည်းငယ်ရှက်သို့မဟုတ်မပြုဖို့ဘယ်လိုသိအပေါ်ခရီးဦးကြိုပြုလမ္း၊စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဘားတန်း။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအချိန်ဖြုန်းဖို့အသည်းအသန်ရှာဖွေနေအဘို့အစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်စည်ကားလမ္း။ အတွက်ချိန်းတွေ့ကလပ်လေးဆယ်ကျော်၊သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါစိတ်ဝင်စားစရာလူတစ်ဦးလျှင်ပင်၊သင်မစွန့်ကြပါ။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စများ၏အရည်အသွေးအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတို့တွင်၊သင်ကျိန်းသေသင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးတွေ့။ အကြိုက်ဆုံးအတွက်ပထဝီဝင်၏သဘောကိုစကားလုံးနှင့်နီးစပ်အကျိုးစီးပွားအတွက်၊အသက်အရွယ်၊သာနယ်။ ရွေးဝိသေသလက္ခဏာများ၏အလားအလာမိတ်ဖက်အတွက်အရှာဖွေရေး။ လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်း။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ခဲ့ပြီအချစ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို၊ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်ရပြီနှင့်အတူမေတ္တာလူတစ်ဦးကျွန်တော်တို့ချစ်ရ။ ဟုတ်လျှင်၊ထို့နောက်အရာအားလုံးကွဲပြားခြားနားရိပ်။ သူတို့ကတော့ဂရုစိုက်ပါတီ၊ကခုန်၊သို့မဟုတ်သောက်သည်။ သူတို့အဘို့ရှာကြသည် ကို၏နှလုံးသည်လူကောင်းတစ်ယောက်ဘဝကိုပျော်မွေ့ရန်။ တစ်အချက်ကြောင့်ကျမတို့နေထိုင်နေကြရတဲ့ခေတ်တွင်ခေတ်မီနည်းပညာ၊ကံမကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်ဖြစ်လာဖို့ပိုမိုခက်ခဲတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်း။ မကြောင့်ကိုအသက်ကျော်ကလူအလေးပိုပြီးဖြစ်လာကြပါပြီဝယ်ထားသည်၊ဒါပေမယ့်ကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူထိုင်များ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တီနှင့်ပျက်ပြယ်ပြီးဖြည့်စွက်အဝထုတ်လုပ်မှုကိုသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေရေးသက်။ ဒါကြောင့်သတ္တိကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကိုယ်နဲ့၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့၊သင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ခဲ့သည်အထူးဖန်တီးဖို့လူတွေကိုကူညီအတွက်၎င်းတို့၏အသက်ရတဲ့ဒုတိယအခွင့်အလမ်းရှာဖွေရန်အသစ်တစ်ခုကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေ။ အာ္၊အစဉျမသိရကြလိမ့်မည်အရာကိုဖွင့်ယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်လျှင်တစ်ခုတည်းနှင့်သင်နှစ်လေးဆယ်ကျော်အရွယ်-ဒါဟာဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်၏အသက်တာကျော်-ဒါကြောင့်ပဲအသစ်တွင်သင့်အသက်တာအဘို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိ။ အများစုကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအသက်ကျော်လေးကိုကြည့်ချင်ကြဘူးများအတွက်ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာဒီအသက်အရွယ်သည်အကြောင်းရင်းတစ်ခုအရေ။ အချို့လူများမှာကြောက်လို့ဒီအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်ထိုသူတို့အချို့လမ်းအတွက် ဆက်ဆံရေးကလေးများနှင့်အတူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၊အချို့သောပြီးသားပြု၊အခြားသူများရုံမလုံခြုံဟုခံစားရနှင့်ပျက်ကွက်မှမကြောက်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုမေးအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်း-ဘယ်လိုအများစုကအသက်တာတွေရှိလဲ? နှင့်တစ်ဦးတည်းသာရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်အချိန်မဖြုန်းတီးကြပါနဲ့ကြောက်၏။ ယူရန်တစ်ဆင့်ပြီးသင်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ အသက်ကျော်ပြည်သူ့လေးဆယ်ဘူးရှာဖွေနေစတင်ရန်ဘယ်မှာသိသည်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဖက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ သို့သော်၊လျှင်အဆိုပါဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုအဟုဆိုကြသည်သို့မဟုတ်သူတို့၏တွေ့ကြပြီဟုသောသူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်း။ ယခုသင်ပြုသမျှအားလုံးသည်မှတ်ပုံတင်မည်ဖြစ်ပြီးဖန်တီးတဲ့ပရိုဖိုင်းအတွက်ချိန်းတွေ့။
ငါရှာဖွေနေများအတွက်ယုတ္တိနှင့်အလိုအလျောက်မြင်၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်အဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိဘဲအထိပြဿနာများ၏အသက်ရှင်ခြင်း၊ရှာဖွေခြင်းသည်။ ကျွန်တော်သိသည်၊သူ့ရဲ့အလားအလာ၊နှင့်သူ၏ပန်းတိုင်။ သူတၱလားအလာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ။ အခါကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာနှင့်ပန်းတိုင်များနှင့်အတူ၊ဒါကြောင့်အံ့သြဖွယ်အပဲ့။ ကျနော်တို့ကောက်တက်သိမ်မွေ့သောတုန်ခါ။ အတိအကျအားဖြင့်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးအလိုအလျောက်-အကျိုးအမျိုးအစား။ လိုလားပေါ်ရွှေ့ဖို့၊လိုပြီးဘဝအတွက်ယုံကြည်ဖွယ်။ သာမန်မိသားစုတစ်စုဘဝကိုအရေးမပါဘူး၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ ငါအဘို့အရှာနေတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊သူသိ၊ရိုးသားသော၊လက်နက်၊ သိမ်မွေ့သောတုန်နှင့်အဆင်သင့်အခြေအခိုက္အသိမ်မွေ့သောတုန်ခါ။ အနိစ္စထာဝရကျောင်းသားနှင့်ခြောက်ဆယ်နှစ်အရွယ်၊အခ။ ကခုန်၊ပုံ၊ခိုင္ေ၊ဖျော်ဖြေပွဲ၊တက်ကြွသောဖြစ်ရပ်များ၊မီးေအုပ်အရာအားလုံး၏စိတ်ဝင်စားလှုပ်ရှားတက်ကြွ၊ရွှင်လန်းသော။ ငါခံစားဖို့ကိုချစ်သက်၊အကအခုန်၊ကောင်းသောအကျင့်၊အကူအညီနှင့်ကြည့်ပြုံးများအပေါ်အခြားလူတွေရဲ့မျက်နှာ၊ချစ်စွန့်စားခရီးသွား၊ပးလ်က္ရိွနှင့်စကားပြောဆိုချက်၊ငါ ချစ်သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ချစ်သေးငယ်တဲ့သားသမီးများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ။ မေတ္တာ၊စိတ်အားထက်သန်၊အလှအပ-ဒါကကျနော့်ရဲ့ဂျီ။ ငါသည်အသက်ရှင်သောအမျိုးအစားမှာအိမ်။ အားလုံးငါ့အသက်ကိုငါမနေထိုင်ခဲ့ကြ၊လေ့လာနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့၊အတွက်စိန့်ပီတာစဘတ်။ တဝက်ကို-သွေးင္ငံ:အမေဂျူး၊ဘရာဇီး။ အရွယ်ရောက်သောသားဘဝ။ ငါခဲတဲ့ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့:ငါချက်ပြုတ်အမှန်ဟင်းလျာများ၊လေ့ကျင့်ခန်း။ ငါ့အဆိုး:အမျှ၊ဒီဇုိင္းလက္ဆြဲအိတ္၊လူ၊ယဉ်ကျေး။ ပြိုင်ဘက်လည်းပြော:မကောင်းတဲ့အံ၊ပြဿနာများနှင့်အတူအဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊အိပ်မပျော်။ လို့အိပ်စက်အတွက်သီးခြားအိပ်ချင်လျှင်တစ်ဦးလမ်းလျှောက်ယူမှအတူတကွ။ ငါသည်လူများအတွက်အလေးအနက်အရှည်လျား-အခေါ်အဝေါ်ကြားဆက်ဆံရေး။ သူတစ်စုံတစ်ဦးကသိလိုထွက်၏။ လျောက်ပတ်သော၊ကောင်းမွန်သော၊စမတ်ဖုန်း။ ကျွန်တော်ရှာတွေ့ဖို့အလေးအနက်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးအားကြီးသောဇာတ်ကောင်စရိုက်၊ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအ၊အနိုင်မှလေးမြတ်တန်ဖိုးထား၊လေးစားမှုနှင့်ချစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ဘာတွေပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်သာမန်နေ့သို့တစ်အားလပ်ရက်? ပြုမှနိုင်ရန်အတွက်တရားမျှတမှုသည်အဘယ်ကိုအထူးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကို၊ကျွန်မဖန်တီးချင်တယ်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်အသီးအသီးအခြားအစဉ်အမြဲပါဘဲ။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါချိန်းတွေ့ဆိုက်အမျိုးသမီးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်။ ဒီနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အရည်အသွေးကိုအမျိုးသမီးအားလုံးမှနိုင်ငံအနှံ့မှာအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ရန်။ ဒါပေမယ့်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်၊သင်သုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများသာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၊ဒါပေမယ့်လည်းအခြားနိုင်ငံများအတွက်ကမ္ဘာ၏။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊မေတ္တာကိုရှာတွေ့၊အသစ်အသိအကျွမ်း၊မိတ်ဆွေတွေကိုရှာဖွေ၊ထို့နောက်ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်၊အကျွန်ုပ်တို့၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။
အများစုမှာမိန်းကလေးများသည်သူတို့ဘယ်မှာမသိရပါဘူးတဲ့လူကိုခရီးဦးကြို၊ရှိသောနေရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အဘယ်မှာရှာတွေ့မှသူ့ကို။ တကယ်တော့၊အရာအားလုံးထက်ဟန်၊ထိုသို့အလိုငှါနှစ်သက်ဖွယ်သူတစ်ဦးကိုတွေ့ရှိဖို့သင်ရွေးချယ်။ ဤဆောင်းပါး၌၊သင်တွေ့လိမ့်မည်ဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါ၏ယောက်ျားမိန်းမ၏အိပ်မက်၊အဘယ်အရာကိုရောက်ဖို့အဘယ်မှာသူတို့ကိုရှာတွေ့မှ။ ဒါကိုသူတို့အဘို့စံပြဖြစ်ရန်အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များချင်ကြပါဘူးအ ။ ပေမဲ့၊အဖြစ်ရွေးပြပါ၊ခေတ်မီ၊မတူတဲ့အခါသူတို့တိုက်ခိုက်ဖို့။ ဒီတော့ပါဘူး၊အကြမ်းတမ်းတုံ့ပြန်မှု၊အဆောတလျင်မပြောဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးအပေါ်အလမ္း။ အခါလူတို့သည်မိမိတို့သဘောပေါက်ပါကြောင်းကောင်းမထိကိုင်ဖို့မိန်းကလေးလမ္း။ ဟုတ်လျှင်၊သင်တန်း၏၊သူမကိုကိုယ်မသိရ။ ပါက သင်လိုအပ်ကြွယ်ဝသောကောင်လေး၊အကောက်အစည်းအဝေး၌တစ်နေရာရာမှာအလယ်ဗဟို၏။ ကြည့်ရှုများအတွက်ကလပ်နှင့်အတူတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအဂုဏ်သတင်း။ ဟုတ်ကဲ့၊သင်လိုအပ်ဝန္ေဆာင္မႈ၊သူမူကား၊မိမိအအာမခံချက်အလက်အတော်အတန်ကြွယ်ဝသောရွေးချယ်ရေးအခန္းအဘို့အနိမ့်ယှဉ်ပြိုင်လူသာလာပါဒီ:အတွေ့ဆုံရန်နှင့်အချိန်ဖြုန်း။ သာဒီနေရာမှာသင်ပေါင်းလဒ်တက်အလင်းရောင်ပေးနိုင်တဲ့:မကြာခဏနက်ဖြန်နေ့၊မိုဃ်းမလင်းအတွက်၊ဒါကြောင့်ထင်ရပေသည်၊မနေ့ကရဲ့ချောမောသောသူ၊သင်အမှန်တကယ်နဂါး။ ပြီးတာနဲ့တဖန်:အမြဲအောက်မေ့သတိရသောညဥ့်အခါဧည့်သည်အများစုဟာသူတို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီတစ်မူထူးခြားသောစကား။ သင့်ရဲ့အစီအစဉ်များပြုနိုင်သည်ထက်ကျော်လွန်မသွားတစ်ညနေ၊ထို့နောက်ရှေ့ဆက်သွား၊ဒါပေမယ့်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်လူကိုရှာဖွေဖို့တစ်ဦးဆက်ဆံရေး၊သတိပြုရကြမည်။ မည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာကိုဖြည့်ဆည်း။ ဤသည်အဘယ်အရာကိုအများဆုံးအသုံးပြုသူများ၏ဤဆိုဒ်များလက်ထပ်ပြီးသည်ကား၊ဒါပေမယ့်မဤမျှလောက်များစွာသော၏ပုံမှန်လူတွေအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ဒါပေမယ့်သေချာပေါက်ရှိပါတယ်အချို့၊စာရင်းအင်း၊သူမှတ်ပုံတင်ထားကြသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးပြီးနောက်ချိန်းတွေ့ အင်တာနက်ကိုအတွက်။ ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကံကောင်းနေ၊သင်ရုံတိထားပါဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ပြပွဲများ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊တင်ပြ။ အမျိုးသားဒီမှာဆယ်ဆင့်။ ပို၏ထက်ဝက်ကျော်သူတို့လိုဖြစ်စေချင်တာ၊စေချင်တာ၊စေချင်တာ။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာအဲဒါထက္ပိုေကာင္း သို့မဟုတ် ။ ဒါကြောင့်ထွက်ကိုစောင့်ကြည့်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာ၊သင်၏ မေပုန်းအောင်း။ အများအပြားစုံတွဲများသူထဲသို့မဝင်ဆက်ဆံရေးနှင့်ကျွမ်းရနွေရာသီအတွက်အားလပ်ရက်အပေါ်၊ကမ်းခြေမှာ။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်ပြီးနောက်အပြင်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခံစားရပိုပြီးအခမဲ့၊ပွင့်လင်းအောင်။ သူကအဆင်သင့်အဘို့နယူးအစည်းအဝေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးများ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အကြောင်းအရာအားလုံးယီလက်ဝဲအတိတ်အတွက်။ မှတည်ငြိမ်လည်းမပိတ်ဖို့သင်ကိုယ်တိုင်ကိုချစ်ဖို့ဆက်သွယ်လျှင်ပင်၊ပထမတစ်ချက်မှာအလေးသို့မဟုတ်လူဘဲဖြစ်ဟန်တစျခုသင်တို့အဘို့အရှာနေဖြစ်ကြောင်း။ ပထမဦးဆုံးကရိုက်ချက်အဖြား။ အအောင်မြင်ဆုံးသောဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနောက်အစည်းအဝေးမှာကျောင်းသို့မဟုတ်အလုပ်မှာ။ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်ဒီအတွက်၊အထူးသဖြင့်အပျော်ရွှင်စုမ်ား၊ဒါပေမယ့်လည်းသင်ဆဲအသိအားလုံးလျှို့ဝှက်ချက်များကို၊အကောင်းနဲ့အဆိုးအရည်အသွေးအတွက်ကျောင်းသို့မဟုတ်အလုပ်မှာ။
မတိုင်းလတ်အမျိုးသမီးအတွက်ကံကောင်းသူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာအိမ်မှာ၊ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသင်ပြန်ထိုင်နှင့်အထီးကျန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းနည်းလမ်းရှာဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မည်၊သင်မူကား၊ရှိသည်အနေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလုပ်။ ကောင်းတစ်ခုဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများအကိုင်တစ်စီးရီးများအစည်းအဝေးအမျိုးသားများနှင့်အတူနေထိုင်နေ။ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ၊အများအပြားအားကောင်းလိင်၏ကိုယ်စားလှယ်၏အိပ်မက်လက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တူလှပါတယ်အလတ်အသွင်အပြင်။ သူတို့ကတန်ဖိုးကိုသာပြင်ပဒေတာ၊ဒါပေမယ့်လည်းကြည်၊ချင်းချောင်၊အနိုင်စွမ်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အချိန် အခုအချိန်မှာအရှုံးမပေးသင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုပေးသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူသည်လူကိုခရီးဦးကြိုအလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအပေါ်ဆိုက်ကမ်းလှမ်းကြောင်း။ ဖန်တီးလျှင်သင်ကောင်းတစ်ခုအစုစုအပေါ်အရင်းအမြစ်နှင့်အတူမြင့်မားအသွားအလာ၊သငျသညျစီစဉ်အလေးအနက်အစည်းအဝေးနှင့်အတူကြွယ်ဝ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အာရုံစိုက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်၊သင်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်အာရုံစိုက်။ တော်ကြာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်သင်ကူညီနိုငျသောဥရောပကိုဆွဲဆောင်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်လိုအပ်အကိုရွေးချယ်ပါသင့်လျော်သောဓာတ်ပုံများ။ သူတို့ဖြစ်သင့်၏အရည်အသွေးကောင်း၊လေပိုကောင်းလေဘဲ ၊ပြီးတော့တို့နိုင်တယ်။ သင်ရှာသင့်ဓါတ်ပုံများသင်ပျော်ရွှင်ပြုံး၊သူတို့ထဲကအချို့သင့်အတွက်အပြည့်အဝတိုးတက်မှု။ ဓါတ်ပုံများအဝတ်အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်မှရှောင်ကြဉ်သောခံစားချက်သင်ရုံအလုပ်လုပ်ကိုင်သို့မဟုတ်လျှော့ပေါ့အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး။ သူတို့ပြသင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဘက်သင့်အသက်တာ၏။ အားဖြင့်ဓါတ်ပုံများကိုလွှတ်တင်အတွက်အုိင္အုိသို့မဟုတ်တောင်မှပိုပြီးမပါဘဲ၊ဒါကြောင့်ပိုကောင်းပေးစေခြင်းငှါ၊အဖြစ်အလေးအနက်အစည်းအဝေးနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသူအမျိုးသားများမမြင်နိုင်ကြ။ သင်တန်း၏၊ရှိလိမ့်မည်များအပြားသတင်းစကားများ၊ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုကလိမ့်မည်ညစ်ညမ်း။ ထို့အပြင်၊သင်မည်မဟုတ်လေးစားသောအချက်ဥရောပတိုက်မပူဇော်ကြပါ။ အလေးအနက်အစည်းအဝေးနှင့်အတူလူများအခုထိနေရာယူ။၊သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အရေးအနည်းငယ်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်။ ငါဆိုသည်ကားရပါမည်သင်သည်အပြုသဘောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်သူတစ်ဦးသည်ကြောက်လန့်များ၏အခက်အခဲများ။ သင့်အကြောင်းရေးဖို့သင့်ရဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှု၊အလုပ်အကိုင်၊အလုပ်၊နှင့်ဝါသနာ။ စာသားစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သင့်သည်ရလွယ်ကူစေရေး၊အလေပိုကောင်းလေအတွက်အဆင္ေသည္။ လျှင်သင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြပါပြီနှင့်အတူကြွယ်ဝသောအမျိုးသားများအဘို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊ရန်အလွန်အရေးအတွက်ထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ပါ။ သည်လိုအပ်သောပြသရန်အလားအလာသူတစ်ဦးခင်ပွန်းကရှိပါတယ်သူ့ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်သည်သူ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလက်တွဲဖော်-ကိုဖန်တီးရန်တစ်မိသားစု၊မသာပွပွဖို့၊နိုင်ငံသားအဖြစ်၊ပြီးသားရှိပါတယ်သောအရာတစ်ခုခုတက်အဆုံးသတ်မည်။ ကျနော်တို့ကြိုးစားသင့်ရထိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသိရပါတယ်ကျွန်တော်စကားပြောဖို့ပိုကောင်း၊ဒီတော့သင့်အတွက်စိတ်ဝင်စားသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားအရည်အသွေး၊အရွယ်အစား၏။ ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုလုံးဝလိုအပ်သောများမှာ။ သူတို့မသင့်လျော်သော၊ဒါကြောင့်မလျော်ဖို့သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ။ အခါအလားအလာမိတ်ဆွေတင်ဖြင့်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေ၊သငျသညျအဖြစ်သင့်တိ၊ကိုယ့်အဖြစ်ကြွယ်ဝသောဥရောပတိုက်ဘယ်တော့မှမဤကဲ့သို့သောပြုမူ။ ဆက်ဆံရေးစတင်ရန်နှင့်အတူဥရောပ၊ကိုပြုမထားသောကြောင့်၊မကြာခဏယောက်ျားပြည်ပမှဖြစ်ကြောင်း၊ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လက်တွေ့ကျပြီးအစီအစဉ်ကိုမိမိတို့ဘဝအတွက်လာမယ့်နှစ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊အဲဒါကိုလိုအပ်ခံရဖို့အလေးအနက်နှင့်လျော်အတွက်ဆက်စပ်သူမလိုက်။ ဒါဟာသတိရဖို့အရေးကြီးကြောင်းကြွယ်ဝသောလူတို့အလွန်သံသယဖြစ်ဖွယ်။ သူတို့မလိုချင်ကြဘူးအမွားမ်ား၊ဒါကြောင့်သူတို့မေးခွန်းအားလုံးကိုသတင်းအချက်အလက်။ ဒါကမဖြစ်သင့်ဘယျကွောငျ့အအိပ်ကိုဝတ်ဆင်”မျက်နှာဖုံး”။ အနှေးနဲ့အမြန်သို့မဟုတ်အကြာတွင်၊ဤအမှုအလုံးစုံဖြန့်တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း၊အဆန့်ကျင်တွင်၊ကျွန်တော်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းထင်မြင်ရင်းမှန်သူတစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်ပါသည်ချို့ဒီဂရီမှ။ ဒါပေမယ့်လည်းတန်ဖိုးရှိသွားဝေးလွန်း၊တစ်ဦးသောသူကဲ့သို့ထင်စေခြင်းငှါ၊သူသည်အရိုင်းစိုင်းနှင့်အဆင်သင့်ဖွင့်ဖို့ပထမဦးဆုံးလာ။ ဒါဟာအကြံပြုထားသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်တည်ဆောက်ဖို့အသံကြင္းနှင့် အနှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာ။ ဥရောပ၌၊လုံလောက်ရှိပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီး၊ဒါကြောင့်ကောင်းပြသရန်ကိုယ်ကျိုးနွံမှု၊ချိုသော၊နူးညံ့သော၊ဣတ္။ လူကဲ့သို့ခံစားရအရပါသောသူ၏စိတ်နှလုံးအနိုင်ရလှပသောအမျိုးသမီး။ လက်လွတ်မမူဒီအခွင့်ဖြစ်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုအောင်နိုင်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်လက်ထပ်ဖို့လူဥရောပတိုက်ကနေ၊သင်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်စိတ်၏လူအဖို့အဘယ်သူပိုင်။ ဒီကနေသင်တို့ကိုကယ်တင်နားခြေလှမ်းများနှင့်ကြေညာချက်များ။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ကရေးတဲ့အတွက်ကြိုတင်မဲအတွက်ဂရိသို့မဟုတ်စပိန်၊သင်အန္တရာယ်ရတဲ့တုန့်ပြန်ကြောင်း၌သင့်ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်သင်၏စာပေးစာယူနှင့်ကျော်လွန်။ အတူဆွီဒင်နှင့်ဂျာမန်အတွက်၊သို့သော်၊အဆိုပါလှည့်ကွက်အလုပ်မဖြစ်ဘူး၊အဖြေခဲ၊ဘုရား၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ထင်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းသင့်ပုလ္ဝိ။ သူလည်းလိုအပ်ကြောင်းပိုမိုသိရန်အစဉ်အလာနှင့်ဘာသာတရားကိုအဘယ်အလားအလာခင်ပွန်းကျူးလွန်သည်။ အများဆုံးဖွယ်ရှိ၊သူတို့အမည်ပြောင်းလဲဖို့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်။ လျှင်ဤသည်လက်မခံ၊သင်တို့အဘို့အထို့နောက်သင့်ရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်။လူမ်ိဳးနဲ့ဘာသာတရား၏အသတို့သား။ ထိုသို့ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ် များအတွက်စံပြတဲ့ဘာသာစကားသင်ယူနိုငျသောအကြောင်းပြောတဲ့အနာဂတ်အိမ်ထောင်ဖက်၊မဟုတ်ရင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူသူတို့ကိုလက်ထပ်ပြီးနောက်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်အရွယ်ရောက်ပြီးတွေ့ဆုံရန်သူအမျိုးသမီးသူတို့ရဲ့နှစ်ဆယ်ကျော်အတွက် အနှစ်လေးဆယ်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း-ခ်ိတ္ဆက္ကာလူမႈကြန္ယက္။ လွယ်ကူသောရှာဖွေရေးအတွက်အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးရဲ့ပရိုဖိုင်းအတွက်လွယ်ကူသို့မဟုတ်အလေးအနက်။ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုပြောပြကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်တန်ဖိုးရှိအနည်းငယ်အချိန်ဖြုန်းစက္ကန့်ပိုင်း၊မိနစ်ပိုင်း၊နာရီပေါင်းရှာဖွေနေများအတွက်အခြားတစ်ဝက်၊အသုံးမကျမှချွေးအလမ်းများ၊ကဖေးအတွက်၊အရက်ဆိုင်၊ ရှာဖွေနေကြသောအခါ။ သင်လုပ်နိုင်လျှင်ဤကိုသာအားဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်များအတွက်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီး၊ဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်ပိုက်ဆံသို့မဟုတ်အချိန်ပေါ်မှတ်ပုံတင်နှင့်အစည်းအဝေးတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုမိန်းမ၏အရသာ။ လွယ်ကူသောအစည်းအဝေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ရေး၊သို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာအတိုအဆိုပါရွေးချယ်မှုရင်းသင့်သည်။ ဒါကြောင့်သာအနည်းငယ်ကြာချယ်လှယ်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေ။ စတင်ကြိုးစားဖို့ဖြည့်စွက်ထွက်အနည်းငယ်တွင်ဆိုက်၊တကယ်တော့၊သင်ရွေးချယ်ဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်သင်ယူအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အနည်းငယ်သူ၏အမျိုး၊ကိုယ်နှစ်သက်ရုပ်ရှင်များသို့မဟုတ်စာအုပ်များ၊၏ရှေ့မှောက်တွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊နိမိတ်လက္ခဏာကိုစောငျ့(ဘယ်သူသိ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြင်္သေ့နှင့်အတူတစ်ပရိသတ်အားမခက်ခဲသည်။) ပြီးတော့မမေ့ဖို့အနည်းငယ်ကောင်းသောသူမြား ဓါတ္ပံုမ်ားကို’။ ဒုတိယအဆင့်လိမ့်မည်ရှာဖွေဖို့အလိုရှိသောအဘို့အမိတ်ဖက်-သတ်မှတ်သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်(ရှိကြ၏အားလုံးအသက်အရွယ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်)နေရာ၏နေအိမ်(အမှတ်တမဲ့သင်တို့ရန်ဆုံးဖြတ်ဖို့အခြေခံကျကျပြောင်းလဲမှုသင့်အသက်တာကနေရွှေ့ ကို နှင့်မိတ်ဆွေများ၊သူတို့မတွေ့သေးသူတို့ကို)၊ပြီးတော့၊ပြီးတော့ကိုတိုက်ရိုက်သွားရွေးချယ်မှုကနေတဆင့်။ ဒါတွေအားလုံးရှိဂျူးအစေခံသာ၍လွယ်ကူချောမွေ့အတွက်အလားအလာမိတ်ဖက်။ နှင့်အမှန်၊ထိုသို့သောအစည်းအဝေးပါစေကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူနှင့်အချိန်ကိုကယ်တင်သောအထူးသဖြင့်အရေးပါသည်ဤအတွက်ရှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ လူတိုင်းသိသောခံစားခြင်း၊ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ခံစားချက်များ၏ဖိနှိပ်မှု၊စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရှိသောအခါတစ်ဦးအလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်စုံတစ်ဦးအများပြည်သူအရပ်ဌာန၌။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့သေချာပါစေဘယ်တော့မှမနိုင်ပါအဘယ်အရာကိုတစ်စုံတစ်ဦးသင့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်။ ထို့ကြောင့်၊ဒါကြောင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူအရေးတိပြုမိဖြစ်သေချာပါဤသည်တူညီသောအရာသင်တို့အဘို့ရှာကြသည်၊တစ်အလိုရှိသောမှလူသစ်ဖြည့်ဆည်း။ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုနှင့်ထိုသူတို့ကိုအကြောင်းကိုရေးဖို့ပါပဲ။ သို့မဟုတ်ဒါကြောင့်မကြာခဏဖြစ်ပျက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ငြီးငွေ့ခံစားရပြီးအထီးကျန်၊ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများမရှိတော့နားလည်၊လုပ်ချင်နားထောင်ရန်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြိမ်၊သင်လိုအပ်နေတဲ့ကလောင်ပဲနားထောင်သောသူ၊ပြောဆိုနေတဲ့စကားလုံးမျိုး၊သို့မဟုတ်အနှုတ်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေ။ မည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရား၊အထိခိုက်မခံနှင့်စေ့စေ့မျိုးသမီးသင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ သေချာအောင်သင်တွေ့ကြပြီအတိအကျညာဘက်အမျိုးသမီး။ သိမှရအမျိုးသမီးတစ်ဦးပျော်မွေ့၊လူမှုရေး၊ဖော်ရွေမှု၊ဂရုစိုက်၊သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကြင်နာသူတို့တုံ့ပြန်မည်တူညီသောလမ်း။
ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဒီထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းရှာဖွေရန်အဘို့မေတ္တာမြို့၏။ အခမဲ့စာရင္းသြင္း၊ဖောင်ကိုဖြည့်ပြီးစတင်အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်၊ရိုးရှင်းတဲ့အရောနှင့်အရပ်သုံးစကား၊အချစ်နဲ့ရက်စွဲများငယ္ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဒီထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းရှာဖွေရန်အဘို့မေတ္တာမြို့၏။ အခမဲ့စာရင္းသြင္း၊ဖောင်ကိုဖြည့်ပြီးစတင်အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်၊ရိုးရှင်းတဲ့အရောနှင့်အရပ်သုံးစကား၊အချစ်နဲ့ရက်စွဲများ။ ငယ္
ရှေးခေတ်ကာလတုန်းကတည်းက၊လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိအကြံပြုအမျိုးသားများမဟုတ်ဖို့ပတ်ပတ်လည်လှည့်လာမယ့်သူတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်း၏အင်္ကျီ။ ဒါဟာမလိုအပ်ဖြားယောင်းရန်တစ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်ကသင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်၊ဘယ်အရာမျှမဖြစ်နိုင်ပါ၊နှင့်နားထောငျတျောမှအမျိုးသမီးကိုတော့လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်၊သင်ကဘယ်လိုစဉ်းစားရန်သဘာဝကျပါတယ်ရှာအနည်းငယ်အဘို့အသစ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဖွင့်ဖွင့်ဒီလိုအဖြေကဦးကြိုပြုခြင်းရှေ့မှာသင်တို့၏အမျိုးသမီး၊သင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်သူမ၏အဘို့အ။ တကယ်တော့၊ကမ္ဘာ၏အပြည့်အဝလှပသောမိန်းကလေးလိမ့်မည်သူကိုပျော်ရွှင်စွာအိပ်ရာဝင်သည်သင်နှင့်အတူတစ်ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာသည်။ သို့သော်လျှင်သင်သူမ၏ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မာစတာ၊သင်လးကိုအရာရာ။ သငျသညျမဖွစျနိုငျကြောင့်တို့ကိုလှည့်တစ်ဦးဂုဏ်သရေရှိတဲ့ဇနီးနှင့် အစွမ်းထက်လူကို။ ထိုဆန့်ကျင်တွင်၊အဖြစ်နိုင်လျှင်တန်ဖိုးရှိမဟုတ်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်တာ။ ထိုသို့ယူဆပါကအဆိုပါထုတ်ဖော်၏အချက်ကိုဖောက်ပြန်၏ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့၊သင့်ရဲ့ရည်းစားလိမ့်မည်အိမ်မှာ၊သူတို့သည်တိုက်မည်ဆိုး။ တူရုိက္သ၊သင်မသိဘူး။ ကောင်းစွာ၊ထို့နောက်သူတို့မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်လူငယ်ပျော်ရွှင်မှု၊ဘွင်းဘွင်း၊လိမ့်မည်ဟုလတ်တလောအဖြစ်လသည်။ ပထမဦးဆုံးအလျှင်ပင်၊သင်အိပ်ရာမဝင်ချက်ချင်းသူမသတိထားမိမည်မဟုတ်။ အားလုံး၏အကြံအစည်အမျိုးသမီးငယ်စေ့စပ်နှင့်အတူလူငယ်တစ်ဦး၏ခင်ပွန်း။။။ဒါရကျိုးနပ်သည်၊အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊သောအခါစိတ်အားထက်သန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟံ၊သာကျေနပ်မှုရှိနေပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့သိရန်အပျော်အမျိုးသမီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်။ အဲမဟုတ်အများအပြားရှုံး။ အဲဒီအချိန်အများကြီးကြားအချိုရည်။ ကောင်းသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပူးပေါင်းဖို့တစ်မိသားစု၊ဒါဟာလုံးဝလူမဆန်။ မင့်လျှင်ပင်၊အဖြစ်နိုင်လျှင်သင်လက်ထပ်ပြီးနောက်။ အချစ်ရှုံး၊နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့တတ်၏။ ဟုတ်ကဲ့၊ဒါ့အပြင်အတွက်ဖော်ရွေထုံးစံအပြီးတတိယတစ်ဦးကသူ့ဇနီးအကြောင်းငါ့ကိုပြော၊ဒီပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်သင့်ရဲ့လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်မှုကို ဒါဟာသက်ဆိုင်တစ်ခုလုံးပျော်ရွှင်သောမိသားစုများရှိပြီးသားတည်ရှိပြီး၊နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နိုင်ရင်ကလေးများနှင့်အတူ။ မဖယ်ရှားပစ်ရရန်ထိုကဲ့သို့သောမင်္ဂလာအမျိုးသမီးမှမိမိအဆက်ဆံရေးနွေးထွေး၊မေတ္တာသိုက်။ သူမ၏အသက်သာရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ပျင်း။ ဒီနေရာတွင်များမှာ၊နှင့်သင်အပေါ်ရေတွက်နိုင်။ အနည်းငယ်စွန့်စားဘူးမည်သည့်ထိခိုက်၊ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်မရှိအန္တရာယ်အတွက်။ အသိပညာဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်နိုင်နေရာတိုင်း-သာပန်းခြံတွင်ပြတိုက်၊တစ်ဦးပြပွဲမှာဆိုင်အတွက်အရောင်း၊အလုပ်မှာ၊ကိုယ့်အပေါ်အလမ္း။ လမ်းဖြင့်၊အလုပ်ခွင်၌သာရှိသည်မဟုတ်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးကြောင့်၊သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူအမြင်အာရုံအားနည်းကံကိုသတိပြုမိအရာတစ်ခုခုလည်းမရှိကြောင်းကြား။ ထိုမိန်းကလေးလွဲချော်ဘယ်တော့မှအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူဤ။ ဘားတွင်၊သင်မှာထိုင်တဲ့စားပွဲခုံနှင့်အတူတာဝန်နှင့်အတူအကြံပြုချက်”အဘယ်အရာကိုထိုကဲ့သို့သောအလွအပေတည်း”။ တစ်ဦးပြပွဲမှာသို့မဟုတ်ပြတိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အပြပွဲနှင့်အတူကဆှေး။။။။ လမ်းအပေါ်၊အမေးများအတွက်အချိန်သို့မဟုတ်လမ်းညွန်။ အတွေ့အကြုံ သောသူပင်အဘို့အမေးဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ချက်အနောက်ဘားချက်ချင်းသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်သကဲ့သို့အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ပါကသူမရည်ရွယ်ချက်မရှိ၊သူမ၊ သင်တန်း၏၊သူသေဘာနဲ့သင်ပြလမ်းအဖြစ်ခွင့်ပြုဖို့ချိန်း။။။။။ ပန်းခြံအတွက်၊သင်မေးနိုင်မှခေါ်ဆိုမှုကိုမိုဘိုင်းဖုန်းအကြောင်းဖြစ်နိုင်အတွက်ပျောက်ဆုံးနေသောမြက်။ သင်သာမေးသင့်ဖုန်း”ခေါ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်မကြာမီသင်ချခြင်းဖုန်း”။ သူသည်မိမိကိုမိမိခေါ်ဆို။ ဒါကြောင့်မိမိဖုန်းအရေအတွက်ကို။ များစွာသောအရှက်အခုအချိန်မှာ၊နှင့်အမျိုးသမီး”ခန္ဓာကိုယ်အတွက်”တန်ဖိုးအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသားနှင့်သိမ်မွေ့သော။ သင္ကားအစည်းအဝေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ထိုက်။ ရွေးချယ်သင့်တော်သောအရပ်လမ်းလျှောက်ဖို့။ ချင်ရင်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ပွင့်လင်းသောလေ၊ပိုကောင်းချဉ်းကပ်မှုအရောင်းစက်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းသောရာအရပျ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဒီလိုလုပ်ဖို့အသွားတစ်မြို့ပန်းခြံ၊စတုရန်း၊ထြက္သ၊စသည်တို့ကို။သင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူ။၊လမ်းလျှောက်သွားသို့မဟုတ်ထိုင်ပေါ်အမျိုးသမီးရဲ့ခုံတန်းလျား၊သင်မေးရန်ရှိသည်သူမ၏အနည်းငယ်လိုအပ်ကြောင်းမေးခွန်းတွေအမဖြစ်မနေဖြေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊မေးမှရရန်မည်သို့မည်သည့်နေရာ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အမည်၏နေရာအရပ်ကိုသိသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်အနီးအနားတည်ရှိ။ အမေးအမျိုးသမီးအတိုင်းလိုက်နာပြီး၊စိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်၊စတင်စကားလက်ဆုံနှင့်အရသိ။။။။ တွေ့ဆုံအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏လက်ျာရဲ့အရွယ်များ၏တဦးတည်းအတွက်အခမ်းအနားအခန်းပေါင်း။ အမျိုးသမီးမကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုမျိုးမျိုးသောတင္မည္၊သူတို့များသောအားဖြင့်စားလိုသောအရသာတစ်ခုခု။ စားပွဲသို့သွားပါဘယ်မှာအမျိုးသမီးအမတ်ကြီးနှင့်မေးလျှင်အထိုင်လာမည့်ဖို့သူ့ကိုသို့မဟုတ်မဟုတ်။ ပူဇော်အဘိုးပူဇော်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအဘို့ထဲကရှာတွေ့နှင့်အတူသူမ၏အကြားအလုပ်အကိုင်များကိုတိုးတက်လာဖို့လိုတဲ့ပုံစံ။ အပြားနည်းလမ်းများကိုရှိပါတယ်ချိန်းတွေ့၏။ ဥပမာအားဖြင့်၊အမျိုးသမီးတစ်ဦးကောင်းချီးများအတွက်သူမ၏ပုံ၊သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ကူညီမှန်ကန်စွာ၊သို့မဟုတ်အချို့အခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေသိမှရရန်သူမ၏နှင့်အတူစကားပြော။ အာရုံစိုက်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အလုပ်မှာသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်။ အဲဒီမိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်အပြည့်အဝ၏သားတို့တွင်သူတို့ကိုအားပေးတော်မူသောသူတို့လေ့လာနေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်၊သင်သည်အလွယ်တကူရှာတစ်ဘုံဘာသာစကားနှင့်အတူသူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေဟုတ္ဖူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်နှင့်ဓါတ်ပုံများများအတွက်သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ရွေးဂြိုဟ်တု သင့်လျော်သောအရွယ်အစား။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အမျိုးသမီးများမှာလက်ရှိတန်ဖိုးအတွက်တစ်ဦးမျှမျှတတအသေးစားစက်ဝိုင်း၏အမျိုးသားများအတွက်၊ဒါကြောင့်သူတို့များသောအားဖြင့်အလွန်ဆန္ဒရှိဖို့လေ့လာသင်ယူနှင့်အစဉ်အမြဲအဆင်သင့်ဆက်သွယ်ဖို့။ ဒါဟာအတော်လေးလွယ်ကူသည်မျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်သောသူရောင်းရောင်းစက်မှတဆင့်လူမှုရေးကွန်ရက်။ ပဲမွမွ်ေဝမည္မေးရရန်သင့်အားသိကျွမ်းနှင့်အဆက်အသွယ်တည်ထောင်။ အချို့လူများကချင်ဖုန်းဆက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားဖြင့်တင်ရယ်စရာရင်းနှီးသောမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အတူကလေးများ၏မိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများသို့မဟုတ်အပေါ်မိမိတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်-ဒီအစဉ်အမြဲတစ်ဦးလွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ သားသမီးမတူကွဲပြားစွာတွေးနေပြီး၊ဒါကြောင့်ဒီအစည်းအဝေးသင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ကောင်းစွာအနာဂတ်အတွက်၊နိုင်ရန်အတွက်အလျင်အမြန်ရှာဖွေသုံးဘာသာစကားနှင့်အတူငယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ထိုကလေး၏မိဘ၊သူတို့ကိုပြောပြသက်ဘယ်လောက်သူတို့က၊အဘယ်အရာကိုသူတို့အလုပ်၌မိမိတို့အအခမဲ့အချိန်၊သူတို့မည်သို့တုံ့ပြန်ဖို့အစည်းအဝေးစိမ်း။ ဒီကူညီပေးပါမည်၊သင်ပိုကောင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်၏ပထမဦးဆုံးတွေ့ဆုံမှုအကြောင်းစဉ်းစားပြုမူဖို့ဘယ်လိုဤအချိန်ကာလအတွင်း၊နှင့်အဘယ်သို့စကားပြောကိုစတင်သင့်ရဲ့ကလေးနှင့်အတူ။ ကြိုးစားပေါင်းစပ်ရင်းနှီးအချို့နှင့်အတူ ဒီ့အကြောင်းသင့်ကလေးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်နိုင်မှာတွေ့ဆုံရန်တစ်ဦးတိရစ္ဆာန်ရုံသို့မဟုတ်ဆပ်ကပ်၊သွားဖို့အတူတူရုပ်ရှင်၊သို့မဟုတ်အလည်အပတ်တစ်ခု။ ဤအမှု၌၊သင်၏ငယ်စဉ်ရှိလိမ့်မည်ကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များ၊နှင့်အသငျသညျနိုင်လိမ့်မည်ခံစားရရန်ပြည်သူအတွင်းစကားလက်ဆုံ။ သင်တို့သည်လည်းတတ်နိုင်သမျှရှာပါအကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်းပြောဆိုရန်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆွေးနွေးကာတွန်းဇာတ်ကောင်များရွေးချယ်ခြင်း၊အရသာကုသတူတူ၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ မမေ့စေဖို့အနည်းငယ်သောဆုကြေးဇူးကို။ ေျဖကစားစရာသို့မဟုတ်အပိုင်းအစ၏။ လျှင်သင်အတိအကျဘာကိုသိသူအသည်းအသန်အကြောင်း၊သူသည်အနိုင်ပေးအသစ်တစ်ခုကိုစစ်တုရင်၊စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာအုပ်၊စသည်တို့ကို။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အတွက်၊မေးမြန်းဖို့အခမဲ့ခံစားရသူကလေးတစ်ဦးအကြိုက်များကိုစားရန်လိုလား။ မေးဘယ်လိုလုပ်နေနှင့်အတူသင့်ရဲ့နယူးရည်းစား၊အဘယျသို့စိတ်ဝင်စားဖို့အမှုအရာဖြစ်ပျက်ဖို့သူ့ကိုပြီးခဲ့သည့်အချိန်။ ထိုကလေး၏အသက်တာကိုမကြာခဏအလွန်တက်ကြွစွာပြောပြနိုင်ဟာသကနေကျောင်းဘဝနှင့်အတူစကားပြောရွယ်တူချင်း၊စသည်တို့ကို။ သတိရ၊သူ-ကလေးများကဲ့သို့အလွန်ကြီး။ ပြောပြသင်၏ကလေးစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုခု ကၽြန္ုပ္၏။ ဥပမာအားဖြင့်၊မဖော်ပြသင့်ကား၊တိုင်းပြည်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှု၊နှင့်သင့်အလုပ်။ ပြောပြကလေးသူငယ်အရာကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားသည်။ သူလည်းဆောင်အချို့အလွဆင္ပ၊ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့အခွံ၊တစ်စု၏ကျောက်စရစ်ခဲ၊၊နှင့်အခြားသေးငယ်သည့်ပစ္စည်းများ။ ပေးဖို့အသစ်ရဲ့အဖော်။ မခံမရပ်ကြဘူးလာမည့်ဖို့သူ့ကိုသို့မဟုတ်ကြိုးစားမှပါဝင်၏အားလုံးလှုပ်ရှားမှုများအလေးအတွင်းအစည်းအဝေးနှင့်အတူ။ သူစတင်သည်နှင့်အတူကစားခြင်းကစားစရာကား၊အယူအစိတ်အပိုင်းဂိမ်းအတွက်။ သွားဖို့အသိက္ခာအတူတကွရိုက်ကူးမှာဒိုင်များ၊စသည်တို့ကို။ သတိရကြောင်းအရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သင်တို့အဘို့အကလေးသူငယ်ကိုခံစားရကြောင်း”ထိုစိတ်ဓါတ်များကိုအတွက်”။ ဤအမှု၌၊သူလိမ့်မည်ခံစားရပ်တန့်အဖိနှိပ်နှင့်အနည်းငယ်ကြောက်နှင့်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်အမှားနှင့်ပိုကောင်းဖို့ဘယ်လိုနားလည်တည်ဆောက်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ နှင့်အောက်မေ့သတိရသောအယူမှရှည်လွန်းယူကလေးသူငယ်အကွာမှမိဘများသို့မဟုတ်ရွယ်တူချင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်၊မဟုတ်ရင်သူကအခုထိအပျင်းဖို့စတင်နိုင်ပါသည်။
ဒီဗီဒီယိုကိုပြသသင်မည်သို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်မိန်းကလေးများ။ လျှင်သင်နှင်းအွန်လိုင်း၊သင်အချိန်ကယ်တင်မည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ၊သငျသညျအများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ အဘယ်မှာရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမ၊အဘယ်သူမျှမမကျေနပ်မှု၊မပင်ဤအိမ်တော်၌၊အတွက်ရှေ့တော်၌မဖြစ်။ သူတို့လေးမြတ်တန်ဖိုးကျွန်ုပ်တို့၏ကြင်နာ။ နေရာမရှိရှိပါတယ်အတွက်နှိုးဆော်။ ဖဲအထွက်မှာပြတင်းပေါက်ကအရုဏ်။ လာကြ၊သခင်၊ကြင်နာနှင့်ရိုးရှင်း။ နှင့်နှင်းခဲ့သောအဖြူနှင့်အ ။
မဖော်ပြရကျိုးနပ်ထပ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လွတ်လပ်ဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အမေရိကန်အဘယ်သူသည်လက်ထပ်ထားတဲ့အမေရိကန်နှင့်ဝင်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ ဤသည်မသာမှုကြောင့်ဖို့အဆင်သင့်သောနေထိုင်မှုအခြေအနေအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ အဆိုပါအချက် အမေရိကန်အမျိုးသားများ၏အရေအရည်အသွေးတွေအကြောင်းသူတို့ကိုအလွန်ဒုက္ခ။ တကယ်တော့၊အမေရိကန်တွေအလွန်သတိထား၊ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တာဝန်ရှိ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာကြီးစွာသောသဘောမျိုးဟာသကဘူး။ ဆက်သွယ်ရေးအတွက်၊သူတို့ကအရမ်းဖော်ရွေ၊အမြဲတမ်းပြုံးနေ။ အမေရိကန်အမျိုးသားအလွန်တက်ကြွ၊သူတို့အဘို့အဆင်သင့်အထူးကြပ်မတ်လုပ်။ ကျောင်းမှာ၊သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးသောမ၊အမှစွမ်းရည်ကိုမှအချက်ပန်းတိုင်နှင့်အောင်မြင်။ လည်း၊လေးစားအမေရိကန်မိသားစုအမျိုးသားများအတွက်၊ကောင်းတဲ့ခင်ပွန်းနဲ့အဖေ။ အပေါ်နိုင်ငံတကာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကြီးမားတဲ့အရေအတွက်၏အရည်အသွေးကိုအမေရိကန်ယောက်ျား။ ဤအချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။မြောက်ဘက်အမေရိကန်မကြာခဏပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှုန်းဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်တစ်မိသားစုနေအိမ်၊အရာအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသောကနေအဲဒီအတွက်ဘရာဇီး။ ဤကိစ်စတှငျ၊အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိကြောင်းအတိုင်းဘရာဇီးအမျိုးသမီးတွေ့ဆုံမည်နှင့်လက်ထပ်တဲ့အစာရှောင်-ကြီးထွားလာအမေရိကန်။ မေရိကတိုက်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု(ယူအက်စ်အေ)အတွက်ပြည်နယ်မြောက်အမေရိက။ ဧရိယာအားဖြင့်(သန်းကီလိုမီတာ)အဖြစ်ဖြင့်လူဦးရေ(လူသန်းပေါင်းများစွာ) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရပျကိုယူ။ မြို့တော်ကိုတိုင်းပြည်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယ်စပ်ကနေဒါနှင့်မက္ကစီကို၊နှင့်လည်းစပ်သည်နှင့်အတူဘရာဇီး။ မေရိကန်ပစိဖိတ်၊အတ္တလန္တိတ်နှင့်အာတိတ်သမုဒ္ဒရာသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ပြည်၏တန်ခိုးအာနုဘော်၊တန်ခိုးအာနုဘော်ဒီနိုင်ငံအတွက်ထင်ရှားတဲ့အရာအားလုံးကို၏အများဆုံးနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေပိုင်နက်၊အညားခွဲထွက်နှင့်မျှော်ရန်၊အရာအားလုံးကိုထိအလက်များ။ ဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောကြဲျ:အမျိုးမျိုး၏တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု၊ဘာသာ၊ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ရာသီဥတု။
အကောင်းဆုံးမိန်းကလေးငယ်ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေဖို့သင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊သင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် နယူးစိတ်ဝင်စားစရာအသိအကျွမ်းနှင့်ရစစ်မှန်သောအချစ်။ ဒီနေရာမှာသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ပေါ်နှိပ်ခြင်းသင်တို့သည်ရလတံ့သောအပိုဆောင်းအခွင့်အလမ်းများအတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့သည်ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်သန်းကျော်ပရိုဖိုင်း၊အပါအဝင်ကြီးမားသောအရေအလှမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေကိုချစ်သောသူကိုပျော်စရာရှိသည်။ ရှာချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာသင့်ရဲ့စာန်ကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစု၊ပူးပေါင်းပါဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ သင်ရနိုင်ကျွမ်းနှင့်အတူအသီးအသီးအခြားမရှိဘဲ၊မွတ္ပံု။ မှတ်ပုံတင်လိုအပ်ရန်ရွေးချယ်စရာ။ ဤသည်အခမဲ့နှင့်အကြာထက်မပို။ ကျနော်တို့ကအာမခံချက်လျှို့ဝှက်ချက်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ သင်အမြဲအတွေ့စုံတွဲတစ်တွဲအလုပ်အဆက်အသွယ်၊တွေ့ဆုံရန်၊နှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကမ်းလှမ်းအခွင့်ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အသီးအသီးအခြားမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာ။ ဒီနေရာမှာလူတိုင်းဖြည့်ဆည်းနိုင်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ဝင်စားဖို့လူများသို့မဟုတ်အကြောင်းပြောဆိုကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ချိန်းတွေ့။ ဆိုက်ပေါ်တွင်ကဲ့သို့အရောသာနှင့်အတူအိမ်၌လူအပေါင်းတို့သည်မြို့ကြီးများနှင့်နိုင်ငံများ။ ကျွန်တော်တို့အကြီးဆုံးချိန်းတွေ့ဒေတာဘေ့စအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ သာဒီနေရာကနေ၊အပေါ်တစ်ဦးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်တွက်တိရစာန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးအဆင်ပြေသောရှာဖွေဒေတာဘေ့စများအတွက်ချိန်းတွေ့မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ၊ကျွန်တော်ပြုမိပါပြီလုံးဝဘာမှမလုပ်ချိန်းတွေ့ပိုမိုလွယ်ကူ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်ပါဘူးချိန်အများကြီးယူ။ ဒါဟာအကြံပြုသည်မဟုတ်သုံးစွဲဖို့”ပုဂ္ဂလိက”၊၊ပင် ၊စသည်တို့ကို။ (အပိုင်းမရှိပါ။ အသုံးပြုမှု၏အသုံးပြုသူသဘောတူ)
“ဘာလဲအဘ?”သူမေးတယ်။ ဒီနေပူကြီးကမ်းခြေ၊အကောင်းဆုံးကော်ဖီ၊အကြမ်းမဖက် ၊ထာဝဘောလုံးနှင့်ကျော်ကြားသောပွဲ။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမအံ့ဘွယ်သောအ အိပ်မက်ဇီး၏။ သူတို့လည်းအိပ်မက်။”ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့လာနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့ဘရာဇီး၊ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်။ ဒီလိုအပ်သည်အချိန်တစ်နိမ့်ဆုံးနှင့်အသုံစရိတ်များ။ ဒါပေမယ့်မှတ်ပုံတင်ပေးသည်သုံးစွဲဖို့အသုံးဝင်သည်န်ဆောင်မှုများ:သင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့အဘို့၊တစ်ဦးဘလော့ဂ်ကိုဖန်တီးဖို့သီချင်းရေးခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိသတင်းစကားများ၊အမြန်ရအချစ်ပါ။ အပေါင်းတို့နှင့်အထက်၊ရေခဲကိုချိုးကိုတွက်ဘရာဇီးနှင့်တွေ့ဆုံသူတစ်ဦးအမှန်တကယ်ပျော်မွေ့။
ပင်ပထမဦးဆုံးနှင့်အထက်အပေါ်ယံအကျွမ်းနှင့်အတူရီယိုဆောင်များအပြားအံ့သြဖွယ်များနှင့်အံ့သြဖွယ်။ ပိုပြီးတိတိကျကျ၊ အချို့သောအရာတွေဟာအတော်လေးညီညွတ်မှုနှင့်သဘာဝအလျောက်:ဟုတ်ကဲ့၊လွတ်လပ်ချစ်ကမ်းခြေ၊ဟုတ်ကဲ့၊သူတို့မရှိဘဲဘဝကိုမြင်ယောင်ကြည့်မရနိုငျ၊သူတို့ကချစ်ခြင်းမေတ္တာအရုဏ်သည်အထိခုန်။ ဒါပေမဲ့ဒီက၏အနှစ်သာရသဘောတရားများ”ကာဘရာဇီးအမျိုးသမီး”မ”ကာဘရာဇီးလူ”၊အရာရှေ့မှာငါ့ကိုသာလျှင်အပြည့်အဝရောက်ရှိ၊ဒီအကျော်ကြား၏ကမ်းခြေရီယို။ ဒါပေမယ့်အများကြီးရှိပါတယ်ဆွေးနွေးချက်၊ယနေ့ငါမသွားချင်ဘူးဆိုပိုကောင်းနှင့်အခွင့်အလှအပနှင့်အလှအပ)။ စတင်ဖွင့်ကြကုန်အံ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ။ ဒီအဘရာဇီးအမျိုးသမီး”တို့”နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊”ကဗျာဆရာရဲ့အိပ်မက်”။ မျက်စိ။ အသားအရေ။ ဘာသာစကားခင္း။ အဖြစ်အလှည့်ထွက်၊မူရင်းကိုကွေးပုံသဏ္ဍာန်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်အလွန်အကျွံ။ ဒါဟာပြန့်နှံ့အပေါ်ချဉ်းကပ်မှုကိုအဆိုပါကမ်းခြေများ၊နှင့်အခြားတဖက်တွင်၊ကျွန်တော်ထင်သည်သွားလေရာရာ၌ထိုသို့ဖြစ်ပျက်။ ဒါပေမယ့်ကမ်းခြေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများကြီးမဟုတ်ခဲ့ကောင်းဖြစ်သော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်၊သူအဆိုအအဂ်င္စီပုံသဏ္ဍာန်ဆိုး)။ အဖြစ်အရာတစ်ခုခုမနှစ်မြို့ဖွယ်ရှိပါတယ်၊အတွေအများကြီးရှိကြ၏ဓါတ်ပုံများနှင့်အကြောင်းပြချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရီယို၊နှင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူတိုင်းသဘောပေါက်နားလည်နိုင်ဤအာရုံစိုက်။ ဒါပေမယ့်၊ရိုးသား စကားပြောသောအမေဘယ်တော့မှမြင်ကြပြီထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှု၏အဆီ။ နှင့်လည်းရှင်းပြဘဲကြာစောင့်ဆိုင်းရန်)ချောင်း၊ဘာဂါ၊ညှပ်နှင့်အမှန်တကယ်၊အသုံးအများဆုံးနှင့်စျေးနှုန်းသက်သာလမ်းပေါ်ကအစားအစာအတွက်ဘရာဇီး။ တိုက်ရိုက်လက်ျာအရပ်ဌာန၌။ သို့သော်အချို့ဒိန်ချဉ်ရှေးခယျြနှင့်လင်မနစ်)။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့ပြော၊အားကစားကပိုပြီးခိုင်မာတဲ့က်ား? ရလဒ်မြင်နိုင်သည်ပင်အဝတ်အချည်းစည်းမျက်စိ။ တကယ်တော့၊၏အတွေ့အကြုံလာရောက်လည်ပတ်အကျော်ကြားဆုံးကမ်းခြေတွင်ရီယိုလင်၏အနည်းငယ်ရောစပ်၊ဒါပေမယ့်အရာတစ်ခုလုံးဝအချို့။ ကျွန်တော်တို့သွားကြဖို့ရှိသည်။ ထိုအလျှင်မ၊ထိုအခါ၊ဟုတ်ပါတယ်၊”မြင်”။ ဒီမှာရီယို၊အပြမည်မဟုတ်လွဲချော်လိမ့်မည်၊ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲရှိပါတယ်။
မုတ်။ နှစ်ခုနစ်နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများ။ အတည်ငြိမ်ပြီးဝင်ငွေနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေး။ ငါချစ်တောင်တက်၊ငါချက်ပြုတ်ကိုချစ်။ မင်္ဂလာဇနီး၊ကျွန်မသမီးနှစ်ယောက်ရှိ၊အိမ်ထောင်သည်၊အသက်ရှင်သော။ ငါချစ်၏ဘဝနှင့်။ ငါမင်္ဂလာရှိ-ယခုအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ကျေးဇူးတင်။ မင်္ဂလာပါ၊ငါသည်အယူကရိန်းအမျိုးသမီးအချိန်တွင်အခါငါအသက်ရှင်သောအတွက်ဆီးရီးယား။ အများစုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါလာမုဆိုး၊ငါနှင့်အတူဖြစ်ဖို့အဆင်သင့်စတင်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအသစ်။ ရာက္ႏ၊ချစ်ကလေးများသည်အလွန်ကြီး။ ငါကြိုးစားဘယ်တော့မှငြီးငွေ့ရသောကြောင့်၊မအရာအားလုံးကိုပြုသောအမှုအတွက်အကောင်းဆုံး။) ငါနှင့်အတူအသက်ရှင်ငါ့သား။ သား။ ငယ်ရွယ်လှပသောမိန်းကလေးဖြစ်ကြောင်းကိုအဘို့အရှာနေတဲ့လူအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊မိသားစုစတင်၊ငါကလေးတစ်ဦးအမည်ရှိ ။
ဘရာဇီးလူ့အဖွဲ့အစည်း၏မူးယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများစနစ်တကျထိုကဲ့သို့သောတစ်ရောင်စုံဝိုးတအခမ်းတက္ေစေအတွင်း၌အတွင်း။ ဘရာဇီးလူ့အဖွဲ့အစည်း၏မူးယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအဖှဲ့အဖစ္သြားေဒါရောငျတအခမ်းသင်တန်းသားများအဖွဲ့အတွင်း။ စာရေးတော်ကြီး။ သူတို့အငြိမ်း၊နှင့်အရာအားလုံးအပေါ်ခဲ့သည်၊နှင့်အတူ ၊သောသူတို့သည်အများရှိပါတယ်၊သူတို့အဖြစ်ဝံ့၊ပတ်ပတ်လည်။
အတူနှစ်ဆယ်ခုနစ်နှစ်၏မေတ္တာနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူရက္မွသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ ရီးရဲလ်ဓါတ်ပုံများ
သိမည်သည့်အသက်အရွယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ညစ်စရာအလုပ်တခုကို၊အစည်းအဝေးလေးဆယ်လူမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံရသည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာအတွက်ရှာဖွေနေကြသည်အသီးအသီးအခြားအဖို့ရှာဖွေသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ ထိုမေးခွန်း၏နေရာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးနောက်အနှစ်လေးဆယ်ဖြစ်လာ၊အလွန်အရေးကြီး။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်လူကို၊ငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းသာဖြစ်ခြင်း၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားပြောပြရန်၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ရုံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ထိုအခါချိန်းတွေ့ကလပ်အတွက်ထက်ပိုမိုလေးဆယ်တိအကျအဘယ်သို့သောသင်တို့အဘို့အရှာနေဖြစ်ကြောင်း။ သင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်ကျော်သည်လူများအဘို့အသက်လေးဆယ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်ပါသည်၊အထူးသဖြင့်ဆိုရင်သင်အနည်းငယ်ရှက်သို့မဟုတ်မပြုဖို့ဘယ်လိုသိအပေါ်ခရီးဦးကြိုပြုလမ္း၊စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဘားတန်း။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအချိန်ဖြုန်းဖို့အသည်းအသန်ရှာဖွေနေအဘို့အစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်စည်ကားလမ္း။ အတွက်ချိန်းတွေ့ကလပ်လေးဆယ်ကျော်သက်အနှစ်၊သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါစိတ်ဝင်စားစရာလူတစ်ဦးလျှင်ပင်၊သင်မစွန့်ကြပါ။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စများ၏အရည်အသွေးအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတို့တွင်၊သင်ကျိန်းသေရှာပါ ကြိုက်တယ်။ အကြိုက်ဆုံးအတွက်ပထဝီဝင်၏သဘောကိုစကားလုံးနှင့်နီးစပ်အကျိုးစီးပွားအတွက်၊အသက်အရွယ်၊သာနယ်။ ရွေးဝိသေသလက္ခဏာများ၏အလားအလာမိတ်ဖက်အတွက်အရှာဖွေရေး။ လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်း။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ခဲ့ပြီအချစ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို၊ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်ရပြီနှင့်အတူမေတ္တာလူတစ်ဦးကျွန်တော်တို့ချစ်ရ။ ဟုတ်လျှင်၊ထို့နောက်အရာအားလုံးကွဲပြားခြားနားရိပ်။ သူတို့ကတော့ဂရုစိုက်ပါတီ၊ကခုန်၊သို့မဟုတ်သောက်သည်။ သူတို့အဘို့ရှာကြသည်ကို၏နှလုံးသည်လူကောင်းတစ်ယောက်ဘဝကိုပျော်မွေ့ရန်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊အချက်ကြောင့်ကျမတို့နေထိုင်နေကြရတဲ့ခေတ်မှာခေတ်သစ်နည်းပညာဖြစ်လာ၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းရန်။ မကြောင့်သူတို့သည်မိမိတို့အလေးဆယ်၌ဖြစ်လာကြပါပြီပိုပြီးဝယ်ထားသည်၊ဒါပေမယ့်ကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူထိုင်များ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တီနှင့်ပျက်ပြယ်ပြီးဖြည့်စွက်အဝထုတ်လုပ်မှုကိုသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေရေးသက်။ ဒါကြောင့်သတ္တိကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကိုယ်နဲ့၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့၊သင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ခဲ့သည်အထူးဖန်တီးဖို့လူတွေကိုကူညီအတွက်၎င်းတို့၏အသက်ရတဲ့ဒုတိယအခွင့်အလမ်းရှာဖွေရန်အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေ။ အာ္၊အစဉျမသိရကြလိမ့်မည်အရာကိုဖွင့်ယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်လျှင်တစ်ခုတည်းနှင့်သင်နှစ်လေးဆယ်ကျော်အရွယ်-ဒါဟာဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်၏အသက်တာကျော်-ဒါကြောင့်ပဲအသစ်တွင်သင့်အသက်တာအဘို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိ။ အများစုကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကျော်၏အသက်လေးဆယ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်ကိုကြည့်ချင်ကြဘူးများအတွက်ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာဒီအသက်အရွယ်။ အချို့သောကြောက်ရွံ့သောဤအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူသူတို့သားသမီးအချို့လမ်းအတွက်ကြောင့်၊အချို့သောပြီးသားဖြစ်ကြောင်း၊အခြားသူများရုံမလုံခြုံဟုခံစားရနှင့်ကြောက်လန့်ပျက်ကွက်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုမေးအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်း-ဘယ်လိုအများစုကအသက်တာတွေရှိလဲ? နှင့်တစ်ဦးတည်းသာရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်အချိန်မဖြုန်းတီးကြပါနဲ့ကြောက်၏။ ယူတခြေလှမ်းနှင့်အရာအားလုံးအကျင့်ကိုကျင့်။ အသက်ကျော်ပြည်သူ့လေးဆယ်ဘူးရှာဖွေနေစတင်ရန်ဘယ်မှာသိသည်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဖက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ သို့သော်၊လျှင်အဆိုပါဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုအဟုဆိုကြသည်သို့မဟုတ်သူတို့၏တွေ့ကြပြီဟုသောသူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်း။ ယခုသင်ပြုသမျှအားလုံးသည်မှတ်ပုံတင်မည်ဖြစ်ပြီးဖန်တီးတဲ့ပရိုဖိုင်းအတွက်ကလပ်”ချိန်းတွေ့အပေါ်မှာကလပ်”။
ကမ်းလှမ်း၎င်း၏ဧည့်သည်များအခမဲ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အမှန်တကယ်အချိန်။ အသစ်ခင်မင်ရင်းနှီးနှင့်ကျပန်းရင်ဆိုင်ဆောင်သစ်တစ်ခုခုနှင့်ယခင်ကအမည်မသိကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာမှ။ အားဆက်သွယ်ခြင်းအတွက်ကျယ်ပြန့်အ၊ငါတို့ရှိသဖွင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာကိုအခြားသူများ၊အပေါများကြွယ်ဝကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်သည်၊နှင့်တဖြည်းဖြည်းဖမ်းမိအသက်တာအားဖြင့်ဤအခြေအနေများနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်စကားပြောမပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကျယ်ပြန့်ပေးထားပါတယ် အပါအဝင်၊သင့်ရဲ့အလားအလာသူငယ်ချင်းများ၊ရည်းစား၊ အနာဂတ်ခင်ပွန်း၊ဇနီး၊ရည်းစား။ အစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်ချိန်းတွေ့နှင့်စကားပြောအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားအစဉ်အလာအတွက်လောကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ။ ရှိပါတယ်မျှဖော်ပြထားခြင်းဖို့လိုအပ်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအမည်သို့မဟုတ်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်။ အခမဲ့ကစားတဲ့ချိန်းတွေ့စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်နိုင်ဆက်ရှိနေ နှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာအဖြစ်၊သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်များ၊အခြေခံမူများ၊အသွင်အပြင်၊အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ။ တွေ့မြင်လျှင်တစ်ခုမနှစ်မြို့ဖွယ်အထီးချက်တင်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေသောသင်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်စေသည်တစ်ခဲယဉ်းထင်၊သင်အတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်စည်းမျဉ်း၏တရားမျှတမှုနှင့်ဆက်လက်သည်းခံနေရန်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်။ ပြောင်းလဲဖို့အခြားသူမပါဘဲနောက်ထပ်ကြောင်းသတိပြုနှင့်ဤကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မဟာအလွန်သာယာသောအစည်းအဝေး။ သင်လည်းဤသို့ပြုလျှင်အသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေအတွက်တစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်များနှင့်ရှောင်ရှားစည်းအဝေးသူတို့ကိုမအပေါ်ဆက်လက်။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်စကားပြောအစည်းအဝေးမပါဘဲမှတ်ပုံတင်လိုအပ်ပြသရန်အကျိုးစီးပွားအတွက်အသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေ။ အာရုံစူးစိုက်ကြပါဘူးသင်၏အာရုံစိုက် သာကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ်၊ပေါ်သင်၏ဝိညာဉ်၌၎င်း။ အားဖြင့်တစ်ဦးကမ်၊သင်စကားပြောနိုင်ကနေလူအတော်များများဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအအွန်လိုင်းကမ္ဘာနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအနီးကပ်ဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အတွက်တကယ့်ကမ္ဘာပါ။ အခမဲ့ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ဝဲကအင်တာနက်အသုံးပြုသူများနှင့်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စည္းထားပါသည္။ ရှိသည်သောသူတို့အဘို့အများကြီးအမှန်တကယ်ချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်း၏အထင်လွဲသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်၊အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးကဲ့သို့ဖြစ်၏မှော်တစ်က၊ဒါကြောင့်သင်ကူညီလိမ့်မည်ကိုကျော်လွှားစိုးရိမ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောနှင့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအတွက်အသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း။ ချက်တင်ကစားတဲ့ပေးသည်နှင့်သင်တစ်ဦးထူးကဲအခွင့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအဘယျသို့ထွက်ရှာတွေ့ဖို့သွင်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊နှင့်ချစ်ကြသည်။ သိရန်ဘယ်လိုခံစားချက်များမွေးဖွားကြတယ်၊နားလည်ရန်၎င်းတို့အနက်နှင့်အာဏာ။ တူခံစားခံရဖို့နီးစပ်သူတစ်ဦးသည်ရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာ၏မိုင်ပေါင်းများစွာ။ ဒါပေမယ့်သင်မရှိဘဲဘဝကိုမြင်ယောင်ကြည့်မရနိုငျနှင့်သူ၏သစ်ကိုမိတျဆှေ။ န့်အသတ်နှင့်အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောအစည်းအဝေး မပါဘဲတစ်ဦးစံချိန်၊သူတို့ကသင်ကူညီလိမ့်မည်ရကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရန်အကောင်းနှင့်မျှဝေသင့်ရဲ့သူဌေး၏အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာသူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူနားလည်သဘောပေါက်နှင့်အပေါ်တူညီသောလှိုင်းအလျားအဖြစ်။ သောင်းရှစ်တစ်ဦးချဉ်းကပ်မှုအသစ်ဆက်သွယ်ရေးမှ:အသုံးပြုသူများအတွေ့အသီးအသီးအခြားအွန်လိုင်းနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သီးအသီးအခြားအသုံးပြုပြီးကမ်။ ဒါဟာသတိပြုသင့်ကြောင်းထိရောက်မှု၏ထိုကဲ့သို့သောအနေနဲ့ရှစ်-ဗီဒီယိုချက်တင်ကအရမ်း၊အရမ်းမြင့်မား။ အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းကိုယ့်ကိုကိုယ်သိမှရရန်နှင့်အခြားသူများသည်စကားပြောဝှက်မှတဆင့်ချက်တင်-အကစားတဲ့၊အလားတူဘရာဇီးနာမည်ကျော်အမေရိကန်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းအတွက်အမည်မသိ၏ပုံစံဗီဒီယိုချက်တင်၊အများအပြားနည်းလမ်းများကိုဖို့ပိုနှစ်သက်တည် ၊မထင်ရှားသူတို့၏အမည်များထုတ်ဖော်မသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအဆင့်အတန်း၊သဘောထားနှင့်အခြားဒေတာ။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်များ၏ဒီလိုမျိုးကမ်းလှမ်းကြောင်း၎င်း၏ဧည့်အခွင့်အလမ်း
ဖောက်သည်များ၏ဆိုက်ကနေဂျာမဏီ၊သြစတြီးယားနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်စိတ်ဝင်စားနေသောများအတွက်တစ်ဦးမိသားစုစတင်ပြီးအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူမိန်းကလေးမှအရှေ့ဥရောပ ဥရောပတိုက်သား။ နိုင်ငံခြားချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝအခမဲ့များအတွက်အမျိုးသမီး။ ဆိုက်တွေကိုမပူဇော်ဘူးမဆိုအပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလွဲသောဤအပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်။ မိန်းကလေးများအနိုင်မှတ်ပုံတင်အပေါ်ဆိုက်အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်”အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း”ကြယ်သီး၊အဆာထွက်ကာနှင့်စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်ထိုက်သောသူကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ အောင်မြင်သောဖြစ်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်စိတ်ခံစားမှုဟန်ချက်လိုအပ်ပါတယ်မှတ်မိဖို့ရိုးရှင်းတဲ့အမှန်တရားကိုရှာဖွေခြင်းချစ်ရသူတစ်ဦးသည်အလုပ်လိုအပ်သောအချိန်နှင့်သည်းခံခြင်း။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ပေးနိုင်ပါသည်လူငယ်အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများနှင့်အတူအခြေအနေအဘို့အချိန်းတွေ့။ ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်မျှဝေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူသင်သို့မဟုတ်သင့်မေးခွန်းများကိုဖြေ။ သို့သော်၊အောင်မြင်မှုရဲ့မူတည်လုံးဝအပေါ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများကိုညာဘက်ကိုရှာတွေ့။ ထိုကွောငျ့၊သင်ယူသင့်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနက်နှင့်ဖြည့်စွက်လျှောက်လွှာပုံစံ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၏အကျိုးစီးပွားကို၊ပညာရေးအဆင့်နှင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတိုးမြှင့်မည်ကိုသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းအတွက်စိတ်ဝင်စား။ အမျိုးသားများအပေါ်ဆိုက်တွေအတွက်ဆပ်နိုင်စွမ်းမှမက်ဆေ့ခ်ျများစေလွှတ်မည်။ အအားသာချက်ဤချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားသည်မတန်တဆနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်တွေအများကြီးတချိန်တည်းမှာပင်ကြောင့်သူ၏ရွေးချယ်မှု၊ဂရုတစိုက်အပေါ်အခြေခံပြီးအကျိုးစီးပွားအတွက်မိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့နှင့်ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်သတင်းအချက်အလက်အတွက်ထောက်ပံ့ပေး။ ဒီအမျိုးသားများအထောက်အကူမည်မျှနားလည်သဘောပေါက်အလေးအနက်စဉ်းစားင်းတို့၏ဆန္ဒအရှေ့ဥရောပကနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊အကျွန်ုပ်တို့၏မိန်းကလေးများခံစားရရန်စိတ်အဘို့အလျှင်လူအတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူသူ့ကိုနှင့်တိုက်ရိုက်မဆိုသတင်းစကားကိုလူမပါဘဲတစ်ဦးတုန့်ပြန်။ လျှင်မိန်းကလေးအတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်အစည်းအဝေးသူတစ်ဦးသည်လူအကြောင်းရေးပြီး၊သူမအကြောင်းကြားသင့်တယ်သူ့ကိုနှင့်ပတ်သက်။ အစတစ်ခုတိုနှင့်နွေးထွေးသောမည္လုံလောက်ပါတယ်။ ဆွဲဆောင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အာရုံစိုက်၊သင်ဖျောပွနိုငျမိမိတို့အစာသို့မဟုတ်မွမွ်ေဝမည္။ ဥရောပအမျိုးသမီးများအပြုသဘောဆီသို့ဦးတည်အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များယူနိုငျအစပြုပြီးစကားပြောစတင်။ ဤမိန်းကလေးများကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်သူတို့မျက်စိထဲမှာ။ ဤတစ်ချက်တင်၊အသုံးပြုသူများကြသည်မဟုတ်အွန်လိုင်းအချိန်အများကြီးဖြစ်ဖို့”မိ”။ အားလုံးမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဖော်ပြချက်၏ဂရုဆိုက်ပေါ်တွင်ပို့ဖို့အသုံးပြုသူများကိုအီးမေးလ်ဖြင့်၊သူတို့ကအလွယ်တကူလက်လှမ်း။ ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်ငါအစဉ်အရတုန့်ပြန်မည္။ သို့သော်၊ကအရေးကြီးပြန်သွားဖို့အတင်းစကားသို့မဟုတ်စာနာဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအချိန်အတွက်၊ထိုသို့ဖြစ်မည်အကြောင်းလူတစ်ဦးအတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်ဆက်သွယ်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်းများစွာဘို့သတင်းစကားပေးပို့ခြင်း။ ရှိပါကမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမေးခွန်းတွေသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြောင်း၊သင်အသွယ်များ၏တဦးတည်းငါတို့၏န်ထမ်းများ။ သည္အေ ။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊ဆိုက်မှတ်ပုံတင်နိုင်မိန်းကလေးများအတွက်စိတ်ဝင်စားနေသောရှာဖွေတဲ့အဖော်အဘို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်စဉ်းစားနေတယ်လက်ထပ်သောနိုင်ငံခြားသားနှင့်အတူအကျိုးဆက်များ၏ရွေ့လျား။ ဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုဘို့လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်၊”အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း”။ ပြီးနောက်၊အဆက်အသွယ်ပုံစံကိုပြသဖို့ဖြည့်စွက်ထွက်:သင်လိုအပ်ရန်သတ်မှတ်သင့်အမည်*၊ ၏နေထိုင်ရာအရပ်၊မွေး၊ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံ၊နှင့်အဝင်သင်၏လက်ရှိအီးမေးလ်လိပ်စာ။ ကိုနှိပ်ပြီးနောက်အပေါ်”မှတ်ပုံတင်ရန်”ခလုတ်ကို၊အီးမေးလ်စေလွှတ်လိမ့်မည်၊သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်အတူတောင်းဆိုချက်ကိုသက်ဝင်စေ၏ကိုယ္ေ။ ဒီအီးမေးလ်တွင်အောက်ပါအချက်အလက်:အသုံးပြုသူအမည်၊စကားဝှက်ကို(သင်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်အတွက်အသင့်ပရိုဖိုင်းကိုချိန်ညှိ)၊လင့်ခ်နှင့်သက်ဝင်၏ကိုယ္ေ။ သင်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါဒီလင့်၊မဟုတ်ရင်ပရိုဖိုင်းကိုအတွက်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်အမျိုးသားများအဘို့အပြီးဖျက်ပေးပါလိမ့်မည်၊၂၄ နာရီအတြင္း။ သင်သည်မပြုလျှင်မည်သည့်အီးမေးလ်ထဲမှာသင်သည်သင်၏ပုံး၊အနှောက်အယှက်ဖိုလ်ဒါ။ သင်မည်သည့်ပြဿနာမျှရှိပါကတည်ပြုသင့်ပရိုဖိုင်း၊ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုသို့မဟုတ်မွမွ်ေဝမည္။ *အမ်ိဳးအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအတွက်စိတ်ဝင်စားနေသောရှာဖွေတဲ့အဖော်အဘို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အရာအချက်တစ်ချက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်စစ်မှန်ကြောင်းသင်ပေးပြီးနှင့်အတူအလွန်အရေးကြီးအချက်အလက်။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊ယခုသင့်အမည်မှန်။ အမည်ဝှက်နဲ့အသွင်အမည်များ၊ပိတ်ဆို့ခံရလိမ့်မည်ေ စီမံခန့်ခွဲ။ ဤနည်းဥပဒေလည်းသက်ဆိုင်သည်အခြားဖြေဆို။ သင့်ရဲ့နားလည်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်”မလို”မှတ်ပုံတင်(အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူများ၏အဘယ်သူ၏ရည်မှန်းချက်ချိန်းတွေ့တည်မေးခွန်းထုတ်စရာသို့မဟုတ်အပြက်အချော်)၊ဆိုက်ကိုအုပ်ချုပ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုစံမ်ား။ ဒါဟာစည်းမျဉ်းသက်ဆိုင်သုံးပြုသူအားလုံးမှချွင်းချက်မပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်၏လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ပေးချင်မှသင်တို့ကိုစိတ်ပျက်။ အဖြစ်မကြာမီအဖြစ်အီးမေးလ်လိပ်စာအတည်ပြု၊အမးခြန္းမည္ဆိုက်အတွင်းနက်ဖြန်နေ့၌ပြီးနောက်၊ဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးစစ်ဆေးမှုများ။ အဆုံးတွင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု၊အီးမေးလ်စေလွှတ်လိမ့်မည်၊သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသိပေးခြင်းသင်အကြောင်းအမးခြန္းဖာ္ျဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။ အကယ္၍အလုပ္သမည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက၊အီးမေးလ်ဖြင့်သင့်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ယခုအချိန်တွင်၊သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အမျိုးသားရဲ့ပရိုဖိုင်း၊ပြင်သင့်ပရိုဖိုင်း၊ဒါပေမယ့်ဆိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။ ဒါကကိုဆိုလိုတယ်သင်ကနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းရေးသားဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့ ပြသရန်။ စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်၊ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအကြံပြုပါသည်သင်သည်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဆိုက်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊အင်္ဂါရပ်များ၊နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်သောထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အသေးစိတ်အတွက်အဓိကအအ”ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်”အပိုင်း။ ချိန်းတွေ့တဲ့လူဂျာမဏီကနေချိန်းတွေ့တဲ့နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ထားသောများအတွက်အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ဆိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်ကအွန်လိုင်း-ကဒ်
ဒီနေရာမှာငါတွေ့သူအခြား။။။။။ ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးသင်တို့အဘို့အကြီးမြတ်အပျော်အပါး။ ကျွန်မတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်လူသားငါလိုခငျြအားလုံးငါ့အသက်ကို၊သူကသူခံစားရ၏။ ခံစားရကဲ့သို့လူသိများပါတယ်အသီးအသီးအခြားအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အအချိန်၊နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာအခုအပြည့်အဝအ၏။ စိတ်ရင်းမှန်၊ ပါဘူး၊အတွက်သင်သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဘယ်အရာကိုသင်ရှိသည်သောသူသည်ကြီးသောအလုပ်လုပ်နေတယ်လူကူညီပေးနေ၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ဤကြီးမားသော။ သူကငါ့ကိုအကူညီခဲ့။ အခြားအရာခပ်သိမ်းသည်ငါ့လက်၌(ဘရာဇီး)လျှင်တစ်စုံတစ်ဦးကပြောခဲ့ၽြန္ုပ္၏ကြိုတင်အကြောင်းစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကိုရှာတွေ့မှအင်တာနက်ပေါ်မှာ၊ငါသာရယ်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ကျွန်တော်သိသောအံ့ဖွယ်အမှုဖြစ်ပျက်ကြောင့်၊ငါ၏အဝက်ဘ်ဆိုက်ရှာဖွေဖို့လူ၊ရှိမုနျကို။ ကျနော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့လူတစ်ဦးအတွက်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေသိအသီးအသီးအခြားအားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ ကျွန်တော်ပဲရှာဖို့လိုအပ်သောအသီးအသီးအခြားရဲ့မိတ်ဆွေ၊ကျနော်တို့ပြု။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဖျက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဖိုင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်လေးစားအသီးအသီးအခြား။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဖေါ်ပြခြင်း။ ငါအလိုရှိသမျှအခြားအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးရှာတွေ့ဖို့သူတို့ရဲ့အချစ်မှာ။ စိတ်ရင်းမှန်၊။ နှုတ်ဆက်၊။ ငါတူငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေးဇူးတင် အားလုံးဖန်တီးသောသူတို့အားဤအံ့သြဖွယ်။ ငါသည်ယုံကြည်သောငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊နှင့်ယခုငါ့ချစ်ခင်ပွန်းက၊၌ငါ့ကိုပူးပေါင်းလိမ့်မည်သောအရာကိုပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေ့ဆုံမှာစတင်ခဲ့ပြီးဆက်သွယ်။ ကျနော်တို့အသုံးပြုခဲ့ကြပြီရှိသမျှအမျိုးမျိုးကိုခေတ်မီနည်းလမ်းအများ၏ဆက်သွယ်ရေး။ နောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ကြည်စည်းအဝေးတွေ၊ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်နိုဝင်ဘာလအတွက်၊ငါသည်အလွန်ဝမ်းသာတယ်။ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့ကျွန်တော့်အတွက်နားလည်ယုံကြည်ကြောင်းနိုင်ငံတကာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အလုံးစုံတို့အဘို့ရှာကြသည်သောသူတို့အဘို့မေတ္တာ၊ငါအကြံပြုချင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်တက်လက်မှတ်ထိုးမဆိုင်းမတွ။ ငါပြီးသားအကြံပေးအားလုံးငါ့သူငယ်ချင်းတွေ။ စိတ်ရင်းမှန်၊သူက။
ငါသည်အမင်္ဂလာဖြစ်မှကြိုဆိုစာမျက်နှာဇီး၏။ ဒီနေရာမှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါနှစ်ဦးစလုံးရာက္ဖိုႏိုင္ငံျခား။ လူတွေကအဆင်ပြေမတယောက်တည်းသာဖြစ်ခြင်း၊၎င်းတို့၏အလိုဆန္ဒအတွက်လူနွေးထွေးမှုနဲ့ချစ်ခင်စုံမက်။ ပြီးတာနဲ့ပြီးစီးခဲ့ပြီရိုးရှင်းသောမှတ်ပုံတင်ပုံစံ၊သင်ရှာဖွေနေစတင်သင့်တော်သောအဖော်၊နှင့်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးန့်သတ်ထားလို့မရနိုငျ။ လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှတ်ပုံတင်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်တယ်နေ့တိုင်းဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်၊အများအပြားအောင်မြင်။ ချက်ချင်း၊စုံတွဲများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပုံစံရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို၊အရာထို့နောက်အထုံးချည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကမ်းလှမ်းအားလုံးလိုအပ်သောထောက်ခံချင်သူတွေအတွက်ဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းသို့မဟုတ်ပဲ။ အများကြီးရှိပါတယ်အခွင့်အအောင်မြင်မှာသင်တွေ့ဆုံသည့်အခါလူတွေအများကြီး၊ဥပမာအားဖြင့်ဘရာဇီးကနေ ပြည်ပ။ တစ်စုံတစ်ဦးကိုမကြာသေးမီကဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊တစ်ယောက်ယောက်သုံးစွဲခဲ့သည်လုံလောက်တဲ့အချိန်၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ရုံ၊အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲကြသောအခါဆိုက်၊ကျနော်တို့အကောင့်သို့အားလုံး၏ဆန္ဒကိုအသုံးပြုသူများအဖို့ရချင်သူတစ်ဦးပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့အဆင်ပြေဝန်ဆောင်မှုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုသူတို့အားသိကျွမ်းရ။ တိုင်တဆယ်သို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကြာ၊ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မှာသတင်းစာများ၊သို့မဟုတ်အတွက်ပိုပြီးအစဉ်အလာပုံစံ-လမ္း၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ၊အများပြည်သူနေရာများ၌။ ဒါဟာ၎င်း၏အားသာချက်၊ဒါပေမယ့်ဒီနည်းလမ်းတွေကိုမပူဇော်ရတူညီသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လွှမ်းခြုံအဖြစ်အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး။ ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းသည်မရှိရှားပါး၏သံသယနှင့်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်တစ္လံုးမှောက်သို့အဆိုပါကမ္ဘာသစ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏ဘရာဇီးအတွက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်၊ဝမ်းသာကြိုဆိုသစ်တိုင်းအဖွဲ့ဝင်၏။
သူတို့လိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အခြားဝက်အတွက်မော်စကို။ ရှာဖွေတွေ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်နှင့်အတူသုံးဆယ်ကျော်သန်းတက်ကြွစွာအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်၊အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ၊ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်။ ဒီအကူအညီသင်ရှာတွေ့သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်၊ခင်ပွန်းများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်မိသားစုစတင်ပြီး၊အချစ်၊အတွေ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်သို့မဟုတ်ရုံထွက်ဆွဲထား။ သာရှာ၏အခြားတစ်ဝက်၊မိမိပျော်ရွှင်မှုအတွက်၊မိမိအချစ်၊အနှစ်ကိုယူနိုင်ပါတယ်၊နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ သူတို့သိနှင့်ဆက်သွယ်အလွန်ကိုအလွယ်တကူနဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာ၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းမလိုအပ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုမယူပါဘူးအပြားနာရီ၊ဒီနေရာမှာသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်စာမျက်နှာငါ၏မိုဘိုင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ဗားရှင်းအဆိုက်မှတဆင့်သင့်ရဲ့အီးမေးလ်(စသည်တို့ကို။) သို့မဟုတ်လူမှုမီဒီယာမှတဆင့်အကောင့်အသစ်များ(ဘရာဇီးယိုချိန်းတွေ့၊၊စသည်တို့ကို။)။ မကြောက်ပါနဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်၊အမည်မသိ၊ထိရောက်မှု၊နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ဒါဟာသင့်ရဲ့အချိန်ကိုကယ်တင်။
Czat wideo Meksyk
© 2020 ဗီဒီယိုက ချက်တင် မက္ကစီကို